ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ခရီးစဉ်တွင် ယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို ယာဉ်ထိန်းရဲ ၂၈၀ ?? - Yangon Media Group
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်၏ ခရီးစဉ်အတွင်း ရန်ကုန်၌ ယာဉ်ထိန်းရဲအင်အား ၂၈၀ ဖြင့် ယာဉ်စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်(၂) ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှသိရသည်။ မြန်မာအစိုးရ၏ဖိတ်ကြားမှုအရ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ သို့ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက်မှ ၃၀ ရက်ထိ လေးရက်ကြာ လာရောက်မည် ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်မှစ၍ ရန်ကုန်တွင် ၎င်းင်းတက်ရောက်မည့် အခမ်းအနားတစ်လျှောက် ယာဉ်ထိန်းအင်အား စုစုပေါင်း ဦးရေ ၂၈၀ ကိုနေရာ ချ၍ ယာဉ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ကို ဆောင် ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အမှတ်(၂)ယာဉ် ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက နိုဝင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
“ရန်ကုန်လေဆိပ်ကနေစပြီး ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတက်ရောက်မယ့် အခမ်းအနားရဲ့ခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ ယာဉ်ထိန်းအင်အား စုစုပေါင်း ၂၈၀ နဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ၎င်းင်းကပြောသည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးခရီးစဉ်အတွင်းနိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်၊ နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ကျိုက္ကဆံ အားကစားကွင်း၌ ကက်သလစ် ဘာသာဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ ၀တ်ပြုဆုတောင်းခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ကျိုက္ကဆံအားကစားကွင်း အနီးတစ်ဝိုက်တွင် လမ်းပိတ်လမ်း လွှဲလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်မရှိ ကြောင်း အမှတ်(၂)ယာဉ်ထိန်းရဲ တပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ သိရသည်။
ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်သည် နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် နေ ပြည်တော်၌ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အခြား သော တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံကာ ဆုတောင်းပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ် ဂိုဏ်းချုပ်ဆရာတော်ကြီးများနှင့် အသီးသီး တွေ့ဆုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀ ရက်တွင် ကက်သလစ်ဘာသာ ၀င်လူငယ်များနှင့် စိန်မေရီဘုရား ကျောင်း တွင်တွေ့ ဆုံ ကာ ၀တ်ပြုဆု တောင်းပွဲ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ညနေပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာမည်ဖြစ်သည်။
နတ်ရွာစံ ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် မီးသင်္ဂြိုဟ် အခမ်းအနားသို ထိုင်းပြည်သူ အများအပြား လာရောက် ဂါရဝ??
ဗားမောင့်ပြည်နယ် ဖဲယားဟဲဗင်းမြို့၌ ဆိတ်ကို ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့ဝန်အဖြစ် ရွေးချယ်